Ungawumamela njani umculo kwiiwotshi ezifanelekileyo (i-Android, iApple kunye nezinye) ulator yesiphelo.online ▷ 🥇
Xa usenza isigqibo sokuthenga i-smartwatch, kuya kufuneka uphinde uyivavanye ukusebenza ngokwendlela yokudlala umculo-Ingaba iya kusebenza kuphela njengoluhlobo lolawulo olukude kwi-smartphone yakho okanye iya kuba nakho ukuyenza umjelo womculo kwaye uvumelanise iingoma ukuze ubaphulaphule naphina?
Ngaloo nto izicelo ezahlukeneyo zomculo kunye namaqonga okusasaza afumanekayo kwimarike, impendulo yalo mbuzo isenokungabi lula kunokuba ucinga, ngakumbi kuba akunakwenzeka ukuba usebenze ngomculo okhethiweyo kunye nezixhobo ezifakwe kwi-smartwatch. Siza kubona, phakathi kwezinye izinto, kwezi ziqendu zilandelayo, enyanisweni, eyona nkxaso ibalaseleyo yokudlalwa komculo ungaxhunyiwe kwi-intanethi ayiveli kwiwotshi efanelekileyo eyenziwe nguApple noGoogle.
Nantsi yonke into ekufuneka uyazi Ukukwazi ukubukela iiwotshi ezifanelekileyo ukudlala umculo kwifowuni yakho kwaye ngokuzimeleyo.
FUNDA OKANYE: Eyona smartwatches: I-Android, iApple kunye nabanye
Njengenkokheli yentengiso nakwii-smartwatches, ayothusi into yokubaUkubukela kwe-Apple Nika umsebenzisi ukhetho oluninzi lokumamela umculo kunye nezinye iintlobo zomsindo; I-Apple Music Ngapha koko, lolona khetho lucacileyo: usetyenziso lukuvumela ukuba ulawule umculo odlalwa kwifowuni yakho ngokuthe ngqo kwisikristsi sakho okanye usasaze iingoma ngokuthe ngqo kwiApple Watch ngokumamela ngeentloko. Bluetooth.
Ngokurhuma kwi-Apple Music, ungayihambisa Yonke ingoma kwikhathalogu Okanye umamele yonke into ethengiweyo yedijithali kwaye ingeniswe kwi-smartwatch.
Ukuba iinkonzo ziyahambelana newotshi ekhethiweyo, iingoma zomculo zinokuhanjiswa ngokuthe ngqo kwiApple Watch nge IWifi O LTE; Kwakhona, ukuba ukude kunxibelelwano lwe-intanethi kwaye ufuna ukushiya ifowuni yakho ekhaya, ungavumelanisa iingoma kwiApple Watch kwangaphambili ngokuya Iwotshi yam zikhona kwiApple yeApple kwi-smartphone yakho, emva koko ungene umculo mi Yongeza umculo. Ungqamaniso luya kusebenza kuphela ngelixaUkubukela kwe-Apple nguye ophetheyo.
nanjalo Spotify ine-app ezinikeleyoUkubukela kwe-Apple enokusetyenziselwa ukusasaza iingoma zomculo ngqo esihlahleni sakho okanye ukulawula ukudlala kwesinye isixhobo. Kwaye, enkosi kuhlaziyo lwamva nje, ngoku iyasebenza nakwizixhobo eziphathwayo kunye neWi-Fi, ekuvumela ukuba uphume ngaphandle kwefowuni.
Nangona kunjalo, umthombo woqhagamshelo lwedatha iyafuneka kwaye akukwazeki ukuvumelanisa uluhlu lokudlala kunye newotshi yokumamela ngaphandle kweintanethi.
Ke kukho iapp, Umculo we-YouTube, Ezinikezelwe kwiApple Bukela, kodwa isetyenziselwa ukuphonononga ilayibrari yakho yomculo kunye nokulawula ukudlala kwezinye izixhobo. Imisebenzi efanayo inokufumaneka kwi-app Deezer ngu-Apple Watc.
Inkqubo yokusebenza kweGoogle Wear
Iqonga le-smartwatch le Uphando awukazalisekisi inkxaso epheleleyo ye-sync Umculo we-YouTube leyo, kuthathelwa ingqalelo inyani yokuba Google Play Umculo isusiwe, iyamangalisa kakhulu. Nangona kunjalo, kunokwenzeka ukuba usebenzise Sebenzisa i-OS ukulawula imisebenzi esisiseko ye Umculo we-YouTube kwi-smartphone yakho.
Oku kungasentla kusebenza phantse kuzo zonke iinkonzo zomculo- akukho app Sebenzisa i-OS Ukuzinikezela kwiinkonzo ezinikezelweyo, umzekelo, kwiApple Watch, ke ngoko akukho luhlu lokudlalayo lokudibanisa.
Ukudlala kwakhona kuya kuvela kwi-smartwatch yakho ngalo lonke ixesha isixhobo Android idlala umxholo wemultimedia zombini ngokusetyenziswa nangomdlali wePodcast, kodwa ngaphaya kokuqalisa nokumisa ukudlala, akukho kuninzi ongakwenza kwaye kuya kusadingeka ukuba uhlale uphatha i-smartphone yakho kunye nawe.
Inkonzo yomculo kuphela ene-app ehambelana nayo Sebenzisa i-OS es Spotify Nangona inganikeli ngeempawu ezininzi ngaphandle kwento oyifumanayo ngokudityaniswa okumiselweyo Android nge Sebenzisa i-OS: Unokongeza iingoma kwilayibrari yakho yomculo kwewotshi yakho kwaye utshintshe phakathi kwezixhobo zokudlala, kodwa awukwazi ukusasaza umculo ngqo kwiwotshi yakho, kwaye awungekhe uvumelanise imikhondo yokuphulaphula ngaphandle kweintanethi.
Ukudlala iingoma kwiwotshi efanelekileyo Sebenzisa i-OS ngaphandle kokufuna umnxeba, iInketho ebhetele sisicelo NavMusic ebonelela nge ixesha lokulingwa ngokukhululekileyo emva koko uhlawula: sisicelo esincinci esekwe kugqithiso lweefayile zalapha kwiwotshi yakho, ngaloo ndlela ufumana umculo owuthandayo kwifomathi yedijithali.
I-Fitbit, iSamsung kunye neGarmin
Ibha nganye ye Fitbit su I-Versa Lite ikuvumela ukuba ulawule umculo ngelixa udlala kwi-smartphone exhunywe kuyo, ngokusebenzisa nasiphi na isicelo khetha ukusebenzisa. Kwiiwotshi ngaphandle kweVersa Lite kunye neSense entsha kunye neVersa 3, ejolise ngakumbi kwiinkonzo zamafu, ungangqamanisa iingoma zedijithali ezifunyenwe ngesixhobo sakho ngokusebenzisa usetyenziso Ukudibana kweFitbit.
Kule meko Spotify unikezela isicelo esikhethekileyo kwiiwotshi ezifanelekileyo Fitbit, kodwa kwakhona kukuvumela kuphela ukulawula ukudlala kwezinye izixhobo: enyanisweni, akunakwenzeka ukuba uvumelanise uluhlu lokudlala kunye newotshi. Ukusetyenziswa okukuvumela ukuba wenze oku, nakwesiphi na isixhobo. ngaphandle kweVersa Lite, Ndinguye Deezer mi Pandora. Ufuna, ke, ukuva umculo wakhe kwi Fitbit Ngaphandle kokuba ifowuni yakho isebenze, kuya kufuneka usebenzise enye yeenkonzo zokuhambisa okanye ukope iifayile zomculo zedijithali, njengoko kuchaziwe apha ngasentla.
Ngokubhekisele kuthotho I-Samsung Galaxy Jonga, Ukuqala isicelo umculo Qaphela ukuba kunokwenzeka ukutshintshela ekulawuleni ukudlala umculo kwifowuni ukuya kwewotshi ngokwayo: ukumamela umculo ngaphandle kweintanethi, ungavumelanisa iingoma zedijithali kwiwotshi efanelekileyo okanye wenze iapp isebenze Spotify ezinikeleyo kwinguqulelo Ku lungile ikuvumela ukuba uvumelanise uluhlu lwadlalwayo kwiwotshi efanelekileyo.
Okokugqibela, uluhlu olubanzi lweewotshi ezifanelekileyo Garmin Unokhetho lokudlala umculo olufanayo nolo SamsungUngazisebenzisa eziwotshi ukulawula ukudlala kwakhona kuninzi lomculo usetyenziso kwifowuni yakho okanye ukudlala umculo wedijithali ongqameneyo ngekhompyuter yakho kunye Garmin Connect, Ukuvumela ukuba ushiye ifowuni yakho ekhaya.
Inkonzo yomculo kuphela ehambelana nokusetyenziswa kwendalo kwezi zinto zinxitywayo Spotify kwaye, njengakwizixhobo Samsung, ababhalisele Hilltown Premium banokuvumelanisa uluhlu lwadlalwayo kwisixhobo seGarmin ukumamela naphi na.
FUNDA OKANYE: Yeyiphi i-smartwatch yokuthenga ngo-2021